ရမှေနျ့ရညျးစားရဲ့ဇာတျကွောငျးကို ရငျနာနာနဲ့ ဖှငျ့ခလြိုကျတဲ့ ဒျေါခငျမွတျမှနျ – Cele Lover
ရမှေနျ့ရညျးစားရဲ့ဇာတျကွောငျးကို ရငျနာနာနဲ့ ဖှငျ့ခလြိုကျတဲ့ ဒျေါခငျမွတျမှနျ
ရမှေနျရဲ့ကားနဲ့ဖုနျးကို ထပျတောငျးလာခဲ့တဲ့ ရမှေနျ့ရညျးစားရဲ့ဇာတျကွောငျးကို ရငျနာနာနဲ့ ဖှငျ့ခလြိုကျတဲ့ ဒျေါခငျမွတျမှနျ
အဆိုတျော ရမှေနျဟာ ဇှနျလ (၂၃) ရကျနတှေ့ငျ အစာအိမျသှေးကွောပေါကျတဲ့ ရောဂါဖွငျ့ကှယျလှနျအနိစ်စရောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အခွအေနကေို ကွုံတှလေို့ကျရတဲ့အတှကျ ရမှေနျ့ကို ခဈြခငျကွသူမြားအားလုံးက ဝမျး နညျးပူဆှေးခဲ့ကွရတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့မိခငျကလညျး အားကိုးရလှနျးပွီးမိဘအပျေါသိတတျလှနျးတဲ့ သားလိမ်မာလေး ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့အတှကျ ပွောမပွတတျအောငျကို ဝမျးနညျးခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ဒီနဆေို့ရငျ ရမှေနျကှယျလှနျသှားတာ (၂) လပွညျ့သှားခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခှဲခှာသှားတာမကွာသေးပမေယျ့အားလုံးက အခုခြိနျထိသူ့ကို လှမျးဆှတျသတိရနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။
June လ22 ရကျနေ့ လကျဖြံမှာနှငျးဆီပနျးပှငျ့လေး Tattoo ထိုးပွီးတှတျပီကိုတကျချေါရငျး Suprise လုပျဖို့ကွံခဲ့တာ သူက 23 ဆုံးတော့ မပွလိုကျရဘူး.ခု (2 ) လပွညျ့တဲ့နေ့ မှတျမှတျယယသူ့အတှကျ Tattoo ထပျထိုးခဲ့တယျ.ဘဝမှာကိုယျ့ကိုယျပျေါ တကျတူးထိုးဖွဈမယျ (အထူးသဖွငျ့ ဒီအသကျအရှယျမှာ) တဈခါမှထငျမထားခဲ့ဘူး.ခုတော့လဲ သူ့အကွောငျးပွုပွီးထိုးဖွဈပွီ.နောငျ..ထပျမံထိုးဖွဈမဲ့တကျတူးတိုငျးဂာလဲတှတျပီနဲ့ဘဲ ပတျသကျမယျ.အမတေ့ကျတူးကသာ သူနဲ့ပတျသကျတာ.အမနေဲ့ပတျသကျတဲ့တကျတူး သူ့မှာတဈခုတောငျမရှိခဲ့တာ ရငျနာစရာ.(K) တဲ့.အဖသှေ့ေးအပွညျ့ပါတော့သူတို့ဘဝတှမှော အရေးပါခဲ့တဲ့ သူရဲ့အမညျနာမကို တကျတူးထိုးဖို့မစဉျစားခဲ့ကွဘူး.တှတျပီလဲ ကိုယျ့အပျေါတဈခြိနျလုံးနိုငျစားခဲ့တဲ့၊
ကိုယျတိုငျကဘာမှမဟုတျဘဲနိုငျငံကြျော Cele ကွီးအပျေါ အမွဲမောကျမာဂုဏျဆာခဲ့တဲ့၊ရီးစားနဲ့ပွသနာတကျတိုငျးနောကျတဈယောကျနဲ့ခြိနျးပွီးသှားအိပျတတျတဲ့၊ခတျေဆနျရုံမက ခတျေရှအေ့ပွေးလှနျနတေဲ့၊ယူ့အကိုကိုတို့ကလကျထပျဖို့အစီ အစဉျမရှိဘူး- အပြျောတှဲတာလို့ မိနျးမသိကျခါတပွားမှမရှိ- အရှကျမရှိပွောထှကျခဲ့တဲ့၊အခငျြးခငျြးပွသနာတကျ စကားမြားတိုငျးမဆီမဆိုငျ အိမျကအမနေဲ့နှမကိုဆှဲထညျ့ပွီးမအေ–ိုး၊နှမ –ိုးလို့ ဆဲရေးတတျတဲ့၊သဆေုံးသှားသူကိုမှ မညှာမတာ လူသိရှငျကွားအကွှေး ၃သိနျးတောငျးခဲ့ပွီးလူမသိသူမသိ တိတျတိတျလေး(ကိုကိုက ဘဘေီ့ကို ကိုကို့ရဲ့ကားနဲ့i ဖုံးပေးခဲ့လို့ယူလိုကျမယျ) လို့မကျြနှာပွောငျပွောငျလောဘတကျတောငျးခဲ့တဲ့(တှတျပီကဘဲ သူသတေော့မှာ ကွိုသိလို့ ပေးခဲ့သလိုလို)၊
ဘဘေီဟိုကိုလိုကျလာရငျ ဘာမဇမလုပျတတျဘူး၊ဟငျးမခကျြတတျ၊အဝတျမလြှျောတတျဘူး၊ဒီတော့ ဘဘေီ့အတှငျးခံဘောငျးဘီတှေ ကိုကိုလြှျောပေးမှာလားလို့ မိုကျမိုကျရိုငျးရိုငျး စျောကားခဲ့တဲ့၊ကိုယျ့ရညျးစားဆုံးကွောငျးသိခြိနျ ဆငျဖမျးမယျ၊ကြားဖမျးမယျ(ဟိုကို driver ချေါပွီးတကျလိုကျခဲ့မယျ၊ dead body ရနျကုနျပွနျသယျခငျြလား ? အားလုံးစီစဉျပေးမယျ)ပွောပွီး ကွကျပြောကျငှကျပြောကျပြောကျသှား၊ပရိသတျဖကျလှညျ့ attentionယူ၊မကျြရညျခွူပွီး မကွာခငျClub တှေ bar တှမှော တရုံးရုံးနဲ့ပြျောတျောဆကျနတေဲ့ အပေါစားမ ရဲ့နံမညျကိုမှ မငျးကိုယျပျေါမှာ သရောပါမှတျတမျးတငျ ကဗညျြးထိုးရသတဲ့လား..?ရငျနာလိုကျပါဘိ !
နှမွောလိုကျပါဘိတှတျပီရေ. .အကယျ၍ (K) ဟာ မငျးကိုအရမျးခဈြပွီးတဈနမှေ့မမေ့ရဘဲ နစေ့ဉျမကျြရညျနဲ့မကျြခှကျဖွဈနရေတဲ့ အမကေို့ရညျညှနျးတာသာဖွဈခဲ့ရငျ အလှနျကကျြသရမေငျဂလာနဲ့ပွညျ့စုံပွီးတနျဖိုးအနဂျဂ ရှိမှာဘဲ.ငါ့သားသူတျောကောငျးလေး တှတျပီဘဝဆကျတိုငျး၊အဖဆေိုး၊ရီးစားဆိုး(အရှုပျထုတျမ၊အပေါစားမ၊ကလကေခမြေ၊ကလိမျကကဈြမ)တှနေဲ့ ကငျးဝေးပါစေ. .ကွိတျမှိတျပွီးအောငျ့အညျး၊စောငျ့စညျးခဲ့ရတာ နှဈလရှိပါပွီ.ဒီနတေ့ော့တိုကျဆိုငျမှုတှရှေိလို့ ထိုကျတနျတဲ့ပေါကျကှဲခွငျးမြားအားခဈြခငျရသော.စာနာတရားရှိတဲ့အပေါငျးအသငျး၊ပရိတျသတျကွီးမြားနားလညျပေးကွပါကုနျ . . .I will never forgetN Always Love U. .Tut P.
ရေမွန့်ရည်းစားရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကို ရင်နာနာနဲ့ ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်
ရေမွန်ရဲ့ကားနဲ့ဖုန်းကို ထပ်တောင်းလာခဲ့တဲ့ ရေမွန့်ရည်းစားရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကို ရင်နာနာနဲ့ ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်
အဆိုတော် ရေမွန်ဟာ ဇွန်လ (၂၃) ရက်နေ့တွင် အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တဲ့ ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် ရေမွန့်ကို ချစ်ခင်ကြသူများအားလုံးက ဝမ်း နည်းပူဆွေးခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိခင်ကလည်း အားကိုးရလွန်းပြီးမိဘအပေါ်သိတတ်လွန်းတဲ့ သားလိမ္မာလေး ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက် ပြောမပြတတ်အောင်ကို ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင် ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားတာ (၂) လပြည့်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲခွာသွားတာမကြာသေးပေမယ့်အားလုံးက အခုချိန်ထိသူ့ကို လွမ်းဆွတ်သတိရနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
June လ22 ရက်နေ့ လက်ဖျံမှာနှင်းဆီပန်းပွင့်လေး Tattoo ထိုးပြီးတွတ်ပီကိုတက်ခေါ်ရင်း Suprise လုပ်ဖို့ကြံခဲ့တာ သူက 23 ဆုံးတော့ မပြလိုက်ရဘူး.ခု (2 ) လပြည့်တဲ့နေ့ မှတ်မှတ်ယယသူ့အတွက် Tattoo ထပ်ထိုးခဲ့တယ်.ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ပေါ် တက်တူးထိုးဖြစ်မယ် (အထူးသဖြင့် ဒီအသက်အရွယ်မှာ) တစ်ခါမှထင်မထားခဲ့ဘူး.ခုတော့လဲ သူ့အကြောင်းပြုပြီးထိုးဖြစ်ပြီ.နောင်..ထပ်မံထိုးဖြစ်မဲ့တက်တူးတိုင်းဂာလဲတွတ်ပီနဲ့ဘဲ ပတ်သက်မယ်.အမေ့တက်တူးကသာ သူနဲ့ပတ်သက်တာ.အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တူး သူ့မှာတစ်ခုတောင်မရှိခဲ့တာ ရင်နာစရာ.(K) တဲ့.အဖေ့သွေးအပြည့်ပါတော့သူတို့ဘဝတွေမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ သူရဲ့အမည်နာမကို တက်တူးထိုးဖို့မစဉ်စားခဲ့ကြဘူး.တွတ်ပီလဲ ကိုယ့်အပေါ်တစ်ချိန်လုံးနိုင်စားခဲ့တဲ့၊
ကိုယ်တိုင်ကဘာမှမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံကျော် Cele ကြီးအပေါ် အမြဲမောက်မာဂုဏ်ဆာခဲ့တဲ့၊ရီးစားနဲ့ပြသနာတက်တိုင်းနောက်တစ်ယောက်နဲ့ချိန်းပြီးသွားအိပ်တတ်တဲ့၊ခေတ်ဆန်ရုံမက ခေတ်ရှေ့အပြေးလွန်နေတဲ့၊ယူ့အကိုကိုတို့ကလက်ထပ်ဖို့အစီ အစဉ်မရှိဘူး- အပျော်တွဲတာလို့ မိန်းမသိက်ခါတပြားမှမရှိ- အရှက်မရှိပြောထွက်ခဲ့တဲ့၊အချင်းချင်းပြသနာတက် စကားများတိုင်းမဆီမဆိုင် အိမ်ကအမေနဲ့နှမကိုဆွဲထည့်ပြီးမအေ–ိုး၊နှမ –ိုးလို့ ဆဲရေးတတ်တဲ့၊သေဆုံးသွားသူကိုမှ မညှာမတာ လူသိရှင်ကြားအကြွေး ၃သိန်းတောင်းခဲ့ပြီးလူမသိသူမသိ တိတ်တိတ်လေး(ကိုကိုက ဘေဘီ့ကို ကိုကို့ရဲ့ကားနဲ့i ဖုံးပေးခဲ့လို့ယူလိုက်မယ်) လို့မျက်နှာပြောင်ပြောင်လောဘတက်တောင်းခဲ့တဲ့(တွတ်ပီကဘဲ သူသေတော့မှာ ကြိုသိလို့ ပေးခဲ့သလိုလို)၊
ဘေဘီဟိုကိုလိုက်လာရင် ဘာမဇမလုပ်တတ်ဘူး၊ဟင်းမချက်တတ်၊အဝတ်မလျှော်တတ်ဘူး၊ဒီတော့ ဘေဘီ့အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေ ကိုကိုလျှော်ပေးမှာလားလို့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း စော်ကားခဲ့တဲ့၊ကိုယ့်ရည်းစားဆုံးကြောင်းသိချိန် ဆင်ဖမ်းမယ်၊ကျားဖမ်းမယ်(ဟိုကို driver ခေါ်ပြီးတက်လိုက်ခဲ့မယ်၊ dead body ရန်ကုန်ပြန်သယ်ချင်လား ? အားလုံးစီစဉ်ပေးမယ်)ပြောပြီး ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပျောက်သွား၊ပရိသတ်ဖက်လှည့် attentionယူ၊မျက်ရည်ခြူပြီး မကြာခင်Club တွေ bar တွေမှာ တရုံးရုံးနဲ့ပျော်တော်ဆက်နေတဲ့ အပေါစားမ ရဲ့နံမည်ကိုမှ မင်းကိုယ်ပေါ်မှာ သေရာပါမှတ်တမ်းတင် ကဗျည်းထိုးရသတဲ့လား..?ရင်နာလိုက်ပါဘိ !
နှမြောလိုက်ပါဘိတွတ်ပီရေ. .အကယ်၍ (K) ဟာ မင်းကိုအရမ်းချစ်ပြီးတစ်နေ့မှမေ့မရဘဲ နေ့စဉ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေရတဲ့ အမေ့ကိုရည်ညွှန်းတာသာဖြစ်ခဲ့ရင် အလွန်ကျက်သရေမင်ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတန်ဖိုးအနဂ်ဂ ရှိမှာဘဲ.ငါ့သားသူတော်ကောင်းလေး တွတ်ပီဘဝဆက်တိုင်း၊အဖေဆိုး၊ရီးစားဆိုး(အရှုပ်ထုတ်မ၊အပေါစားမ၊ကလေကချေမ၊ကလိမ်ကကျစ်မ)တွေနဲ့ ကင်းဝေးပါစေ. .ကြိတ်မှိတ်ပြီးအောင့်အည်း၊စောင့်စည်းခဲ့ရတာ နှစ်လရှိပါပြီ.ဒီနေ့တော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့ ထိုက်တန်တဲ့ပေါက်ကွဲခြင်းများအားချစ်ခင်ရသော.စာနာတရားရှိတဲ့အပေါင်းအသင်း၊ပရိတ်သတ်ကြီးများနားလည်ပေးကြပါကုန် . . .I will never forgetN Always Love U. .Tut P.
Previous Article ခငျပှနျးဖွဈသူကိုယျပှါးလေးတှရေဲ့လကျကိုမွဲမွဲတှဲပွီးအကောငျးဆုံးရှငျသနျနထေိုငျသှားမှာပါလို့ဆိုလာတဲ့ နနျးမွတျဖွိုးသငျး
Next Article တောတိုးခဲ့စဉျက ကွုံတှလေ့ာခဲ့ရသော ဒုက်ခမြားကို ပွောပွရငျး ဝမျးနညျးလှနျးလို့ ငိုကွှေးခဲ့တဲ့ သငျဇာ